theZOMI: [mrsorcerer:38132] ဥက္ကံမြို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဖွင့်သံနှင့် သတင်းများ
[mrsorcerer:38132] ဥက္ကံမြို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဖွင့်သံနှင့် သတင်းများ
အမေတို့ ဒီမှာ အတူနေလာတာကြာပြီးဘာပြသနာမှမရှိဘူ၊ဒီလူတွေကိုယ်ကုလားလိုကပြေား၇အောင်ကုလားစကားလည်းတလုံးမှ မတတ်ကြဘူး၊ ဒီမှာ အတူနေလာတာရပ်ရေးရွာရေးတွေမှာလည်းအားလုံးတန်းတူကူညီကြတယ်၊အမေဘာလုပ်လုပ် သူတို့ အားလုံးမိဘလိုသဘေားထားပြီးလာကူညီကြတယ်၊အမေဘာတခုမှ လုပ်စရမလိုဘူး။အောက်က လင့်မှာ ကြည့်နိုင်သည်.
<iframe src="https://www.facebook.com/video/embed?video_id=482079178532494" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
ကိုရင်လေးရဲ့ ထွက်ဆို ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ပါ(<iframe src="https://www.facebook.com/video/embed?video_id=481511001922645" width="352" height="264" frameborder="0"></iframe>)
ကိုရင်လေးရဲ့ ထွက်ဆို ချက်ကိုလေ့လာကြည့်တော့ တိုက်မိတဲ့ အမျိုးသမီးကလည်း ကွမ်းယာဆိုင်ကငွေချေပြီး လျှော်ပေးတယ် စခန်းရောက်တော့ လည်း တောင်ပန်တယ်၊ ကိုယ်ရင် လေးက လည်း အသက်အရမ်း ငယ်တယ်၊ဒီလိုငယ်တဲ့ ကိုရင်လေးက လူ မပြေားနဲ့ ဘေးနာမှာ ကာအရှိန်နဲ့ မောင်းသွားရင်တောင်သူ့ ရဲ့ လက်ထဲးက သပိတ်လွတ်ကျ နိုင်ပါတယ်.
ါးကို မတရားအကြောင်းပြပြီး၊ သူတပါနေအိမ်တွေမီးရှို့၊ သာသနာအဆောက် အအုံတွေဖျက်ဆီးတာ၊အရမ်းအောက်တန်ကျလှ ပါပေတယ်။
ကြည့်လိုက်ဦး တော်တော်လည်း နာကျဉ်းစရာကောင်းတာကို. ကိုရင့်လက်ကို တိုက်မိလို့ သပိတ်ပြုတ်ကျတယ်။ ဆွမ်းဟင်းတွေကျကုန်တယ်။ ဒါကိုလည်း လျော်ဆိုလို့ ကွမ်းယာဆိုင်က ပိုက်ဆံချေးပြီးလျော်ပေးတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်လို့ရဲစခန်းရောက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ တောင်းပန်တယ်။
.. ရန်ကုန်တိုင်း ဦးဝင်းနိုင်က ပြောတာ မတော်တဆ တိုက်မိတာပါ.လူတအားတိုးနေတော့ ကိုရင်လေးကို တိုက်မိတာပါ.. ကောင်မလေး ကြောက်လို့ ဆိုင်ထဲတောင် ၀င်ပြေးတယ် ဆိုတာ ပြောထားသားပဲ..တောင်းပန်တယ်လဲ ပြောထားသားပဲ .......................ဒါကို လီဆယ် ပီး ဖိနပ်နဲ့ သပိတ်နိုင်းသလေးဘာလေး မဟုတ်မဟတ် မောင်ကာဠု ..မောင်ကာဠုပြောတာ မှန်သလားအောက်ကလင့်ကို ကြည့်ပါ
Hos Na Lay
ရန်ကုန်တိုင်းမှော်ဘီမြို. မှာရှိတဲ. အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ သို့
အကြမ်းဖက်ဘုန်းကြီး ၀ိရသူဟာဆိုရင် မနက်ဖြန် ည၇နာရီ ကစလို. မှော်ဘီမြို. ဘုရားကြီးလမ်းမှာ မတရားများကိုဟောပြောမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မှော်ဘီမြို.မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်များသတိဖြင့် နေကြပါ ခင်ဗျား။ ဟိုတရက်လောက်က ပဲ မှော်ဘီမြို.မှ ဗလီကျောင်းများကို ၉၆၉ အကြမ်းဖက်ဘုန်းကြီးများမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသွားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က ဘုန်းကြီးတပါးဟာ မှော်ဘီမြို.က ဗလီတွေက ကားလမ်းဘေးတင် အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့ အချိန် အကြမ်းဖက်လို့ ၇တယ်လို.ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ မှော်ဘီမြို.မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသတိရှိကြပါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဆီမှာ ဒိုအာတောင်းကျပါ။
ဒီစာလေးကို share ပေးခြင်.ဖြင်.ကူညီကျပါ။
မှော်ဘီမြို.မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်များကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အဘက်ဘက်မှ စောင်.ရှောက်ပေးတော်မူပါစေ.....အာမီန်း။
အိမ်ကလေးတစ်လုံးကို ကိုယ့်ချွေးနည်းစာသက်သက်နဲ့ဆောက်ကြည့်ပါ
အိမ်ကို မီးရှို့ ခံကြည့်ပါ
ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေသားကျအောင်နေကြည့်ပါ။
ထောင်ထဲမှာ နောက်ထပ် ၁၄နှစ်နေရဦးမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့
လူထူထူပလက်ဖောင်းပေါ်လျှောက်တိုင်း "ငါဘယ်သူ့ ကိုဝင်တိုက်မိမှာလဲ" ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဦးထုပ်တစ်လုံးလိုဆောင်းပြီးလျှောက်ကြည့်ပါ။
Bus ကားတိုးစီးရတိုင်း ကားပေါ်ကတိုးဆင်းရတိုင်း "ငါ့ကိုဝိုင်းရိုက်တော့မှာလား ငါများ ပြဿနာကောင် ဖြစ်သွားမလား"ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကျောမလုံခြင်းအရသာကိုခံစားကြည့်ပါ။
မေလ ၂၊ ၂၀၁၃